Waddo Soo Saarayaasha Muraayadaha Muraayadaha Wadada - Shiinaha Calaamadeynta Wadada Muraayadaha Muraayadaha Warshadaha, Alaab-qeybiyeyaasha
Waad ku mahadsantahay muraayadaha dhalada ee ku duugan astaamaha calaamadeynta, muraayadda muraayadaha waxay ka tarjumayaan nalalka hore ee gaariga darawalka, iyagoo u dhaqmaya sida muraayada oo kale, taas oo ka dhalanaysa "iftiin-soo-kordh" oo wax yeelaya. Tani waa go'aan lagu daro nabadgelyada waddooyinka.
Muraayadaha muraayadaha waa qayb muhiim ka ah nidaamyada nabadgelyada taraafikada. Halkii uu u kala firdhin lahaa iftiinka, iftiinka ayaa lagu hagaajiyay kuullada, taas oo u oggolaanaysa inay ka muuqato wadada dib ugu calaamadeynaysa darawalka.
Kuul muraayadaha milicsiga ah ayaa hagaajin kara hantida dib-u-milicsiga ee qadka calaamadda waddada. Wadista baabuurka habeenkii, laydhka hore ee wadada ayaa ku ifaya khadka calaamadeynta wadada oo leh muraayado quraarad leh, iftiinka nalka hore ee baabuurta ayaa si isku mid ah dib uga muuqanaya. markaa darawalku si cad ayuu u arki karaa wadada horay u socota, wuxuuna si nabadgelyo ah u kaxeyn karaa habeenkii.
Kuusha Dahaarka leh ee Calaamadaha Wadada
Dahaarka ayaa laga samayn karaa 50um-1180um, iyada oo ku saleysan shuruudaha macaamiisha.
Joogitaanka joogga muraayadda muraayadda dushiisa oo ka tarjumeysa laydhadhka baabuurta, mootooyinka iyo baaskiiladaha, kuullada calaamadaha waddada ayaa loo adeegsadaa in lagu hago dadka isticmaala waddooyinka mugdiga. Goorma ......
1.7nd Muraayadaha Kabaha ee Calaamadaha Wadada
1.7nd tusaalooyinka muraayadaha milicsiga waxay si aad ah u hagaajin karaan hantida dib u milicsiga ee qadka calaamadeynta wadada. Wadista baabuurka habeenkii, laydhka hore ee wadada ayaa ku ifaya khadka calaamadeynta wadada oo leh muraayado quraarad leh, iftiinka nalka hore ee baabuurta ayaa si isku mid ah dib uga muuqanaya. markaa darawalku si cad ayuu u arki karaa wadada horay u socota, wuxuuna si nabadgelyo ah u kaxeyn karaa habeenkii.